Xiddigaha laba-geesoodka ah: maxay yihiin, astaamaha iyo muhiimadda | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 15/02/2021 10:36 | Astronomy
Caalamka oo dhan waxaan ognahay inay jiraan balaayiin xiddigood. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaar loo yaqaan laba xiddigood. Kii ugu horreeyay waxaa daahfuray Benedetto Castelli sanadkii 1617. Wuxuu xer ka ahaa Galileo oo wuxuu soo saaray noocyada xiddigaha ah mahadnaqa xaqiiqda ah inuu u tilmaamay telescope dhanka xiddigaha Bear Weyn in jannadu u muuqato mid aad isugu dhow laakiin aan jidh ahaan midaysnayn. Xiddigaha la sheegay waa Alcor iyo Mizar.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa dhamaan astaamaha iyo ahmiyada ay leeyihiin labada xidig.
2 Qiimeynta Xiddiga Labaad
3 Qaar ka mid ah laba xiddigood
4 Nidaamyada binary qaarkood
Markaynu cirka eegno, waxaynu maraynaa xiddigo cayn kasta leh. Waxaan leenahay meerayaal, nebulae, galaxies, kooxo, iyo laba xiddigood. Benedetto Castelli ayaa layaabay, markuu falanqeeyay Mizar, wuxuu arkay inuu leeyahay lammaane. Ku socota lamaanahan waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay xiddiggii ugu horreeyay ee binary la helo. Ka dib iyada, tiro badan oo laba xiddigood ayaa la helay.
Si aad si fiican ugu fahamno dhammaan dhinacyada jireed ee xiddigaha laba-geesoodka ah, aan aragno maxay yihiin astaamaha ugu waaweyn. Way ku habboon tahay in la barto in la kala saaro labada indhood iyo kuwa jireed. Labada indhood ee indha-indheeyaashu waa xiddigahaas oo umuuqda inay wada jiraan laakiin kaliya ujeedo aragti ah. Labadan xiddig runtii iskuma xirna. Taabadalkeed, labalaabyada jireed waa nidaamyo laba ama kabadan xiddigood leh oo jidh ahaan iskuxiran oo ku wareegaya xarun guud.
Kormeeraha, inuu awood u yeesho inuu si fiican u kala sooco labada xiddigood ee run ahaantii midoobay iyo kuwa ku yimaadda saamaynta indhaha, waa hawl adag. Si kastaba ha noqotee, waa hawl aasaasi u ah cirbixiyeennada.
Qiimeynta Xiddiga Labaad
Aan aragno maxay yihiin astaamaha ugu waaweyn ee ka dhigaya xiddigaha laba-labka ah inay kala-saaraan. Qaabka loo kala saaraa waa iyadoo loo eegayo qaabkii loo soo ogaaday. Aan aragno waxa ay yihiin:
Muuqaallo: waa kuwa muuqaal ahaan lagu kala bixi karo muuqaal ahaan ama sawir ahaan.
Astrometric: nooca laba-xiddigle hal xiddig keliya ayaa laga arki karaa, laakiin dhaqdhaqaaqiisa gaarka ah waxaa laga soo xigtay inay wehel leedahay.
Spectroscopic: Kaliya waxaa suurtagal ah in lagu ogaado noocyada xiddigahaas adoo baranaya iftiinkooda iftiinka.
Wareeg ama sawir-qaade: waa la ogaan karaa haddii kala duwanaanta iftiinka la qiimeyn karo. Kala duwanaanshahan laydhku wuxuu dhacaa marka qayb ka soo gudubto lamaanaha hortooda.
Kala soocidda iyo baaxadda muuqata ee labada xiddig ayaa muhiim u ah fiirsashada. Kala soocidda xagalka waxaa lagu bixiyaa ilbidhiqsiyo arc waana waxa muujinaya masaafada u dhaxeysa labada xiddig. Dhinaca kale, baaxadda muuqata ayaa noo sheegaysa sida xiddig waliba u yahay iftiin. Markuu yaryahay tirada baaxada leh ee la siiyay, ayaa ka sii ifaysa xiddiggu. Intaas waxaa sii dheer, waa inaan la iloobin in u fiirsashada xiddigahaas ay ku xiran tahay xasilloonida jawiga. Sidoo kale Waxay kuxirantahay tayada kooxda indha indheynta iyo meesha aan joogno. Dhamaan doorsoomayaashaani waa kuwa qeexaya xalka ugu badan ee telescope-ku yeelan karo. U fiirsashada labada xiddigood waxay kuu oggolaaneysaa inaad isbarbar dhigto teleskoobyada oo aad sidaas u ogaato mid kasta tayada uu leeyahay.
Qaar ka mid ah laba xiddigood
Waxaan soo qaadan doonnaa liis yar oo ay ku jiraan qaar ka mid ah labada xiddig ee ugu caansan midabkooda, dhalaalkooda ama taariikhdooda. Dhamaan kuwa aan sheegi doonno waa arki karaan hiwaayadda. Uma baahnid inaad khabiir noqotid ama aad haysato waxyaabo aad u wanaagsan si aad u awoodo inaad daawato xiddigahaan quruxda badan.
Waa mid ka mid ah labada xiddig ee ugu caansan taageerayaasha cilmiga xiddigiska. Waana inay leedahay midab kala duwanaansho midab leh maadaama mid ka mid ah qaybaha uu yahay oranji iyo kan kalena buluug yahay. Waa wax aad u fudud in la helo, isagoo ah xiddigga labaad ee ugu ifaya Swan. Sifooyinkaasi waxay ka dhigayaan Albireo mid ka mid ah kuwa ugu caansan. Nasiib darrose, dhowaan dayax gacmeedka Gaia ayaa muujiyey inuusan ahayn nidaam binary ah, halkii waa lammaane indhaha ah. Waxay umuuqataa inay muuqaal ahaan ku biireen laakiin runti maahan.
Horaan u soo sheegnay Mizar oo ka mid ah waxyaabaha uu ka kooban yahay Dipper-ka Weyn. Kormeeraha indhaha wanaagsan wuxuu si fiican u kala soocayaa xiddigga dhexe iyo dabada xiddigtaas wuxuuna arki doonaa inay tahay nidaam laba-laaban. Alcor iyo Mizar waa labada xiddig ee kuwada wareega hawada sare. Lama oga hubaal buuxa haddii ay tahay nidaam binary ama haddii ay kaliya tahay laba isbaarood.
Kala soocida labadan xiddig ayaa ku filan si markaa isha loogu kala saaro. Cabbiraadaha masaafadaada xarunta labadan xiddig waxay ku kala yaalaan 3 sano oo iftiin ah midba midka kale. Masaafadaani aad ayey u weyn tahay in loo maleeyo in xiddigahaas ay si naxdin leh u dhexgalaan. Hubin la'aanta cabbirku waa mid aad u ballaadhan oo ay ka sii dhowaan karto sidaan filayno. Si kastaba xaalku ha ahaadee, Mizar waa nidaam laba jibbaar ah oo fudud oo la ilaaliyo umana baahnid in aad aqoon badan u leedahay sidaa.
Nidaamyada binary qaarkood
Xiddiga Weyn ee Weyn waa nidaam saddex-geesood ah. Polaris A iyo Polaris B waxay sameeyeen nidaam binary ah oo aad u fudud in lagu kala sooco telescope kasta. Waxa kale oo jira xiddig kale oo qayb ka ah isla nidaamka loo yaqaan Polaris AB. Tani, si kastaba ha noqotee, waa ka baxsan tahay taageerayaasha, tan iyo markii laga helay 2006 teleskoob hubble.
Waa xiddig kale oo ka ifaya xiddigta Gemini. Waxay qarinaysaa nidaam xiddig lixaad leh oo labadiisa xiddig ee ugu waawayn ay yihiin kuwa ugu cajiibka badan waxaana lagu yaqaanaa magacyada Castor A iyo Castor B.
Waa xiddigga saddexaad ee ugu ifaya xiddigta Andromeda. Shaki la'aan waa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan uguna fudud ee laga heli karo laba xiddigood cirka. Kaliya waa inaad isticmaashaa telescope-ka waxaadna ilaalin kartaa nidaam laba-jibbaar leh farqiga weynna u leh midabada. Waana in qaybta ugu weyn ay leedahay midab u dhexeeya huruud iyo oranjo iyo wehelka ayaa muujinaya midab buluug ah oo aad u kala duwan. Waxay la mid tahay Albireo laakiin aad ayey isugu dhowyihiin.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto labada xiddig iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Xiddigaha Double
Buurta ugu dheer adduunka